September 2, 2021 - Achawlaymyar
အ သက် (၁ ၆) နှစ် မှ (၂ ၄) နှစ်အ တွင်း မိန်းကလေး များသာ ဖတ်ရန် ( တစ်ခြားလူမဖတ်ရ)
September 2, 2021 by Achawlaymyar
အ သက် (၁ ၆) နှစ် မှ (၂ ၄) နှစ်အ တွင်း မိန်းကလေး များသာ ဖတ်ရန် (တစ်ခြားလူမဖတ်ရ) ညီမေ လးရေ …. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွားလိမ့်မယ် . . . . .။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေ က လည်း တစ်ချိန် ကျရင် ပြောင်း လဲ သွားပါ လိမ့် မယ် နော် . . .။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်က တော့ တစ်ချိန် ကျရင် … Read more
အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီေၾကာင့္ ရဟန္းဘဝကိုစြန္႔ၿပီး ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားဘဝကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အရွင္ဥကၠံံံံသ
အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီေၾကာင့္ ရဟန္းဘဝကိုစြန္႔ၿပီး လက္နက္ကိုင္ဘဝကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အရွင္ဥကၠံံံံသ ေျပာျပလို႔မေကာင္းလို႔သာရယ္ ကိုယ္ေတြအသိထဲကကို အမ်ားႀကီးပဲ၊ သကၤန္းစြန္႔ၿပီး လက္နက္ကိုင္ကုန္ၾကတာ ကိုယ္ေတြကသာ ေၾကာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လည္တယ္ပူတယ္နဲ႔ က်န္ေနခဲ့တာ #ကမာၻမေၾကဘူး #ေသြးမေအးဘူး Source -အရွင္သူရိယာလကၤာရ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့် ရဟန်းဘဝကိုစွန့်ပြီး လက်နက်ကိုင်ဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အရှင်ဥက္ကံံံံသ ပြောပြလို့မကောင်းလို့သာရယ် ကိုယ်တွေအသိထဲကကို အများကြီးပဲ၊ သင်္ကန်းစွန့်ပြီး လက်နက်ကိုင်ကုန်ကြတာ ကိုယ်တွေကသာ ကြောက်ပြီး မြို့ပေါ်မှာ လည်တယ်ပူတယ်နဲ့ ကျန်နေခဲ့တာ #ကမ္ဘာမကြေဘူး #သွေးမအေးဘူး Source -အရှင်သူရိယာလင်္ကာရ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီေၾကာင့္ ရဟန္းဘဝကိုစြန္႔ၿပီး လက္နက္ကိုင္ဘဝကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အရွင္ဥကၠံံံံသ ေျပာျပလို႔မေကာင္းလို႔သာရယ္ ကိုယ္ေတြအသိထဲကကို အမ်ားႀကီးပဲ၊ သကၤန္းစြန္႔ၿပီး လက္နက္ကိုင္ကုန္ၾကတာ ကိုယ္ေတြကသာ … Read more
နာမည်မှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတွေက စိတ်ကြီးတယ် ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်သူကိုမှဘယ်အရာကိုမှ ထည့်မစဉ်းစားဘူးထည့်လဲ မတွက်တတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ပြောပီး လုပ်ပီးသွားလို့သူမှားနေတဲ့ကိစ္စကိုလဲပြန်တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး။ စိတ်နာအောင်တော့ လာမလုပ်နဲ့သေတဲ့အထိ မှတ်ထားတတ်တယ် အငြိုးအတေးလဲ ကြီးတယ် အပေါ်ယံခင်မင်တာ မလိုလားဘူးသူငယ်ချင်း အစစ်ပဲ လိုချင်ကြတယ် ယောင်လို့တောင်နာမည်မှာ`သ´ပါတဲ့သူကို အရွဲ့မတိုက်မိစေနဲ့ သူများတွေ ရွဲ့တာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြန်ရွဲ့တတ်တယ်။ သနားအောင်ပြောလာရင်အိတ်ထဲရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကိုယ် မသုံးရရင် နေပါစေပေးပြစ်တတ်တယ် မပေးချင်ဘူး ကြည့်မရဘူးဆိုရင် အဲ့လူဘာဖြစ်နေပါစေလှည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး လိမ်တာ ညာတာ အရမ်းမုန်းတယ် ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အပေါ်မှာတော့ ဟာသတွေ ရယ်စရာတွေပြောပြီး စနောက် တတ်ကြတယ် အနေအေးတယ် တခြားသူတွေကိုဆို ပြုံးပြဖို့ မပြောနဲ့ မျက်နှာထားက ခပ်တည်တည်နဲ့ တေလာကလုံး သူ့လုပ်စာ စားနေ ကြတဲ့အတိုင်းပဲ … Read more
ကြာသပတေးသားသမီးအတွက် ဤရက်ပိုင်းအတွင်းတွင် နာမည်ဂုဏ်သတင်းတိုးတက်မည်၊ ဆုထူးဂုဏ်ထူးရမည် မမျော်လင့်ပဲအလှူအတန်းတစ်ခုလှူရတတ်သည် ပညာကံအထူးကောင်းသည် ရပ်ဝေးနိုင်ငံခြားမှ အလုပ်အကိုင်များ အဆက်သွယ်ရမည် မြုပ်နေသောငွေကြေးများပေါ်မည် ရစရာရှိသောငွေများရမည် အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲ ကြုံတွေ့ရမည် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းအသစ်စတင်ခြင်းကောင်းမည်။ စပ်တူရှယ်ယာတူ ရှောင်ကြဉ်ပါ အိမ်ထောင်အိမ်ဖက် အပြောင်းအလဲ ကြုံတွေ့ရတတ်သည် အထူးသဖြင့် အသက်၃၅၊၃၇၊၃၈နှစ်အရွယ် ရာက်သူများအထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ မြေ၊မီး၊မိန်းမ၊မင်းစိုးရာဇ၊မူးယစ်ဆေးဝါး စသောပြဿနာများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ဘာသာခြား၊လူမျိုးခြား အတိုက်အခိုက်ရှိသည် ကျန်းမာရေးမှာ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်တတ်သည် ချစ်သူရှိပြီးသောသူများ စိတ်ချမ်းသာ၍ ချစ်သူမရှိသောသူများအောင်သွယ်တော်ကို အားကိုးရမည့်ကာလဖြစ်သည် အညံ့များပြေပျောက်စေရန် ယတြာ- တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ရွက်လှ၁၉ညွန့်လှူပါ အကျိုးပေးဂဏန်း – ၁၊၈၊၆ အကျိုးပေးအရောင် – ခဲရောင် ခရစ်တစ် – ဆရာနေမင်းသူရ zawgyi ၾကာသပေတးသားသမီးအတြက္ ဤရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းတိုးတက္မည္၊ ဆုထူးဂုဏ္ထူးရမည္ မေမ်ာ္လင့္ပဲအလႉအတန္းတစ္ခုလႉရတတ္သည္ ပညာကံအထူးေကာင္းသည္ ရပ္ေဝးႏိုင္ငံျခားမွ အလုပ္အကိုင္မ်ား အဆက္သြယ္ရမည္ … Read more
ချစ်သူ နဲ့ ချိန်းတွေ့ပြီးနောက် ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော်မလေး ရေချယ်တေဇ
မြန်မာနို င်ငံမှာအ လွှာအ တန်းအသီး သီးလူေ တွကေ တာ့ ထိပ်ဆုံးမှာရ ပ်တ ည်ပြီး အေးေ ဆးနေနိုင် သူတွေ ကတော့ ခေတ်အ ဆက်ဆ က်ကိုက ရှိလာ တာပါနော်… မြန်မာနိုင် ငံတွင်အ ချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် သူများထဲ တွင်ဦးတေ ဇ.တစ်ဦးလ ည်းအပါ အဝင်ပါ ပဲနော်။ .မြန်မာနိုင်ငံ မှာရောဂါတွေ ထူေြ ပာနေပြီး အရေးအ ခင်းတွေ. ဖြစ်နေ တာကြောင့် သူ့ရဲ့ သမီး .အငယ်ဆုံး အဆိုတော် ရေချ ယ်တေဇ.ကို ပြည်ပနိုင်ငံမှာပဲ အခြေကျ… နေထိုင်စေ.ခဲ့ပါတယ်နော်။ ရေချယ်တေဇ ဟာလည်း အာဏာသိမ်း.ခံ ရစဉ်က သူ့ရဲ့ဆိုရှယ် မီဒီယာများ တွင်ဘာတ စ်ခုမှ မတင်ခဲ့ … Read more
ညအိပ်ရာမဝင်ခင် မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅)ချက်
ပျိုမေတို့အတွက် အသားအရည်လှပဖို့ဆိုတာ လက် တစ်ကမ်းအကွာမှာပါပဲ။ အသားအရည်လှပစိုပြည်ချင်လို့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတဲ့အကောင်းစားမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ နေ့တိုင်းသုံးနေတာပဲ။ သိပ်ပြီးမထူးခြားလာဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အသားအရည်ဆဲလ်တွေက ညအိပ်ရာဝင်ရင်ပြောင်းလဲပြီးအသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအချိန်မှာသာ ကောင်းမွန်တဲ့အလှအပပစ္စည်းတွေသုံးပေးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ မနက်တိုင်းနေ့တိုင်းသုံးတာထက် ညဘက်မှာလုပ်တာကပိုပြီးထိရောက်စေတာပါ။ သဘာဝအတိုင်းအသားအရည်လှပချင်တယ်၊စိုပြည်ချင်တယ်ဆိုရင် ပျိုမေတို့အားလုံး ဒီအချက် ၅ချက်ကိုနေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုရင်… ၁။မိတ်ကပ်ဖျက်ပါ နေ့တိုင်းအလုပ်သွားရုံးသွားနေရတဲ့အတွက် မိတ်ကပ်ကအမြဲတမ်းလိမ်းနေရပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကိုတစ်နေကုန်လိမ်းထားရတဲ့အတွက် ငယ်ရွယ်တုန်းမှာလှပပေမဲ့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမိတ်ကပ်ကြောင့် အသားအရည်တွန့်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိတ်ကပ်ကိုတစ်နေကုန်လိမ်းထားပြီးညဘက်မိတ်ကပ်မဖျက်ပဲအိပ်မိရင်တော့ပိုပြီးဆိုးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အိမ်ပြန်ရောက်လို့ အိပ် ရာဝင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ မိတ်ကပ်အရင်ဖျက်ပါ။ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့သစ်ရုံနဲ့ မိတ်ကပ်တွေအကုန်သန့်စင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ အကြွင်းအကျန်တွေပါမရှိအောင် မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့တစ်ရှူးဖြစ်စေ၊အရည်ဖြစ်စေ အရင် ဆုံးသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ၂။မျက်နှာသန့်စင်ပါ မိတ်ကပ်ဖျက်ပြီးရင်တော့ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့သန့်စင်ပေးရပါမယ်။ မျက်နှာသစ်ဆေးသုံးတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်အသားအရည်နဲ့သင့်တော်တဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးမျိုးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာကအဆီပြန်ရင် အဆီပြန်တာသက်သာစေတဲ့မျက်နှာသစ်ဆေး၊ဝက်ခြံထွက်တဲ့အသားအရည် ဆိုရင် ဝက်ခြံကာကွယ်ပေးတဲ့မျက်နှာသစ်ဆေး၊ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရည်ဆိုရင်သုံးပေးသင့်တဲ့ မျက် နှာသစ်ဆေးစသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မှန်ကန်နဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးသုံးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ဆေးကိုလည်း အနေတော်လောက်လက်ထဲထည့်ပြီးမျက်နှာကိုပွတ်တိုက်တဲ့အခါမှာ ကြမ်းတမ်းစွာပွတ်တိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ မျက်နှာအသားအရည်က … Read more
သင့္အဆီေတြကို က်ေစဖို႔အတြက္ ေျပးတာထက္ ပိုထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္း (၈) မ်ိဳ
သင့္အဆီေတြကို က်ေစဖို႔အတြက္ ေျပးတာထက္ ပိုထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္း (၈) မ်ိဳး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားလိုက္ၿပီဆိုရင္ အရင္ဆုံးေတြးမိတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းက ေျပးျခင္းပါပဲ။ ဒါဟာ အ႐ိုးရွင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘာစက္ကိရိယာ အကူအညီမွ မလိုအပ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔ကို တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏႈန္းနဲ႔ နာရီဝက္ေလာက္ ေျပးျခင္း ဟာ (၁၅၅) ေပါင္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို (၂၉၈) ကယ္လိုရီထိ ေလာင္ကြၽမ္းေစပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြ အတြက္ကေတာ့ ေျပးတာဟာ အဆင္မေျပေစပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေျပးတာကို မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေျပးစရာမလိုပဲ သင့္အဆီေတြကို ေလာင္ကြၽမ္းသြားေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို love media ကေန ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။ ၁။ ႀကိဳးခုန္ျခင္း (၃၇၂ ကယ္လိုရီ) ကေလးေတြသာမက လူႀကီးေတြပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ … Read more
အရမ္းခ်စ္တတ္ေပမယ့္ အခ်စ္ေရးကံမေကာင္းဘူးဆိုတာ ဒီအခ်က္(၅)ေၾကာင့္ပါ
အရမ္းေတာ့ခ်စ္တတ္ေပမယ့္ အခ်စ္နဲ႕ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္တုန္းကမွ ကံမေကာင္းခဲ့တဲ့ လူတစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ဘက္ကခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရယ္လိို႕မရွိေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္အခ်စ္ေရးကံမေကာင္းရတာလဲဆိုတာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း နားမလည္နိုင္သလို၊ ဒီအတြက္ အေျဖလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အဲ့ဒီအခ်က္အတြက္ အေျဖရွိလာပါျပီ။ သင့္အေနနဲ႕ အရမ္းခ်စ္တတ္ေပမယ့္ အခ်စ္ေရးကံမေကာင္းခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင္ အဲ့ဒါဟာ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဟုတ္၊ မဟုတ္ တိုက္ၾကည့္လိုက္ေနာ္။ (၁) ပံုျပင္ေတြကိုယံုေနတယ္ သင့္အေနနဲ႕ နတ္သမီးပံုျပင္ေတြကို ယံုၾကည္ေနျပီး ပံုျပင္ထဲကလို သင့္ကို လံုး၀နားလည္ျပီး အခ်စ္ၾကီးခ်စ္နိုင္မယ့္သူမ်ိဳးရွိလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနတတ္တယ္။ ပံုျပင္ေတြထဲကလို အခက္အခဲေတြအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေပါင္းဖက္ၾကေလသတည္းဆိုတဲ့ အဆံုးသတ္မ်ိဳးကိုေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ကူးယဥ္လြန္းေနေတာ့ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ေတြးထားသလိုမျဖစ္တဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်စ္ေရးကံမေကာင္းဘူးလို႕ ထင္လာပါေတာ့တယ္။ (၂) ဂရုစိုက္တတ္လြန္းတယ္ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို ဆံုးရံႈးရမွာေၾကာက္တဲ့စိတ္နဲ႕ သူ႕ရဲ႕အရာရာကို ဂရုတစိုက္ရွိလြန္းတာ၊ အေသးစိတ္ကအစဂရုစိုက္ေပးလြန္းတဲ့အခါ ၾကာလာရင္ … Read more
“ ကိုယ့်ယောကျ်ား အိမ်မြဲစေချင်ရင် မိန်းမတို့ ဒါတွေရှောင်ပါ ”
ကိုယ့်ယောကျာ်း အိမ်မြဲပြီး ကိုယ့်အနားမှာပဲ အမြဲရှိစေချင်တဲ့ ဇနီးတို့အနေနဲ့ ဒီအောက်မှာ ပြောပြထားတဲ့အချက်လေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးကြည့်နော်။ အိမ်ရှင်မလေးတို့အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သက်လာကြာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ယောကျာ်းက အိမ်မကပ်ဘူး၊ အပြင်မှာပဲ အမြဲနေချင်တယ်ဆိုတာမျိုး ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ယောကျ်ားအိမ်မှာ မြဲစေဖို့အတွက် အိမ်ရှင်မလေးတို့ ဆောင်ရ ရှောင်ရမှာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အိမ်ရှင်မလေးတို့ ရှောင်ရမှာတွေကို ပြောပြမယ်နော်။ ကိစ္စတိုင်းကို ပြဿနာလို့ မြင်တာမိန်းကလေးတွေရဲ့အဓိက ပြဿနာကလည်း စိတ်ပူတတ်တာ၊ စိုးရိမ်တတ်တာ၊ ပွစိပွစိလုပ်တာနဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို ပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခု အဖြစ် တွေးမြင်တတ်တာပါ။ ဒီတေ့ာ အိမ်က ပူပင်တာတွေ ဖြစ်ပြီး မအေးချမ်းတာတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ယောကျ်ားတော်တေ်ာများများက အိမ်ကပ်တဲ့အချိန် နည်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းပြီး ပူညံပူညံလုပ်တာတွေ လျှော့ပါ။ အရမ်းညဉ်းတွားတတ်တာတွေ ရှောင်ပါ။ အသေးစိတ် … Read more